शेयर बजार : नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले घट्यो - नेपालबहस
गृहपृष्ठ फीचर्ड (ट्रेन्डिङ) शेयर बजार : नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले घट्यो
१५ असार, काठमाडौं । सय दिनपछि खुलेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १२.८७ बिन्दुले घटेर एक हजार १८८.७० मा पुगेको छ ।
अघिल्लो लेखलगातारको वर्षाले महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध
अर्को लेखठूलो झुण्डमा आएको सलहले धान र मकै खाइदियो !
तीन दिन जुवाघर बनेको बजार लयमा, बुलिस स्पिनिङ्ग टप बन्दा अन्य प्राविधिक सूचक कस्ता छन् ?
अब लकडाउन अवधिभर शेयर कारोवार बन्द